Nahasondriana ny mason'ny ankizy ireo « Mascotte » vitsivitsy namalifalian’ity farany ny ankizy. Betsaka no nanantena kilalao satria ny Renin'ny firenena no nanasa. Tsy nipoitra anefa ny vadin'ny filoham-pirenena. Tsy nianatra mihitsy ny mpianatra tamin’ny sekoly sasany namonjy ilay fotoana. Rano sy biskoitra no nozaraina ka betsaka no nalahelo fa niandry fanomezana maro hafa. Maro ireo nanantena « surprise » kilalao sy zavatra betsaka no hozaraina amin'ny maha vadin'ny filoham-pirenena nikarakara ny hetsika kanefa dia diso fanantenana, nefa nisy avy lavitra nandeha an-tongotra, niaritra ny hainandro sy hetaheta. Niteraka fimenomenomana tamin’ny fesiboky ity tranga ity omaly. Nasiaka mihitsy ny ray aman-dreny sasany tamin’ny fanehoan-keviny. Marina fa tsy nampanantena kilalao hozaraina ny ankizy izy ireo saingy efa nanantena “surprise” goavana ny ankizy matoa 5000 no nasaina 10 000 no tonga.